HS:- Ciidamadii ugu badnaa oo ku wajahan Bulo Burde
Posted by admin on January 14 2012 14:49:30
HS:- Ciidamadii ugu badnaa oo ku wajahan Bulo Burde. wararka maanta ,14/2012
HS:- Ciidamadii ugu badnaa oo ku wajahan Bulo Burde.
Waxaa maanta ka dhaqaaqay magaalada Belet weyne ciidamo sida la sheegay tiradooda lagu qiyaasay 3000 oo wata hubka noocyadiisa kala duwan iyagoo u dhaqaaqeen magaalada Bulo Burde sida laga soo xigtay dadka ku nool tuulooyinka oo aad ula amakaakay awooda ciidan ee ku wajahan Bulo Burde iyadoona ay ciidamadu ka galayaan magaalada labo jiro.
Ciidamadan ayaan u muuqan iney ku ekaan doonaan Bulo Burde waayo xoogaga Hiiraan kaliya ayaaba siweyn u hubeysan halka kuwa dowlada Ethiopiyana ay u dhan yahiin qalabkooda walow wararka qarkood sheegayaan iney u socdaan tuulo u dhaxeyso Bulo Burde iyo Jowhar oo ay jidka u sii diyaarinayaan ciidamo sida la sheegay ku wajahan Sh/dhexe.
Dhaqdhaqaaqan ciidan ee ku wajan Bulo Burde ayaan sidaas looga dareemeyn magaalada Belet Weyne maadama ay dadku ku mashquulsan yahiin howlahooda shaqo magaaladuna tahay nabad,laakinse abaabulka xoogiisa waxuu ka socdaa duleedyada magaalada marka aad dhinac kasta uga baxdo magaalada ilaa 70 KM.
Warar aan la hubin ayaa sheegeyo in ay ciidamo aan tiradooda la aqoon u kala dhaqaaqeen degmada Tiyeeglow oo ka tirsan Bakool iyo degmada Buq Aqable oo ka tirsan Hiiraan.
Dhinacaas iyo Maxaas waxaa walito ku sugan oo jidka dhawr meelood ka xiray dhalinyaro degaanka ah iyadoona ay mudo 2 sitimaan ah ay kala xiran tahay wadada dheer ee isku xirta Maxaas iyo Bulo Burde kadib markii laga war heley in ay wadadaasi isticmaalayaan saraakiil ka tirsaneyd Shabaab oo ku sugneyd Ceelbuur.
Si kastaba xoogaga Hiiraan oo siweyn u hubeysan ujeedadooduna tahay sidii ay argagixisada uga xoreyn lahaayeen Hiiraan oo dhan ayaa waxaa siweyn magaalada Bulo Burde ku sugaya iney calamo qoyan ku soo dhaweeyaan shacabka ay mudada degmadaasi ku duleysanayeen argagixisada Soomaaliya.